Siyaasi Cabdiqaadir Obsiiye Oo Dhaliilay Hadallada Ay Isugu Jawaabeen Kheyraha Soomaaliya Iyo Madaxweyne Muuse, Kuna Baaqay In Somaliland Danaheeda Ku Gaadho Nabadgelyo Iyo Diblomaasiyad + Muuqaal | FooreNews
Home wararka Siyaasi Cabdiqaadir Obsiiye Oo Dhaliilay Hadallada Ay Isugu Jawaabeen Kheyraha Soomaaliya Iyo Madaxweyne Muuse, Kuna Baaqay In Somaliland Danaheeda Ku Gaadho Nabadgelyo Iyo Diblomaasiyad + Muuqaal
Siyaasi Cabdiqaadir Obsiiye Oo Dhaliilay Hadallada Ay Isugu Jawaabeen Kheyraha Soomaaliya Iyo Madaxweyne Muuse, Kuna Baaqay In Somaliland Danaheeda Ku Gaadho Nabadgelyo Iyo Diblomaasiyad + Muuqaal
Hargeysa, March 10, 2018- (Foore)- Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye (Madaxweynaha Mustaqbalka) oo ah siyaasi madax bannaan oo mar walba inta badan ka hadla xaaladda dalku marayo ayaa waxa uu si adag u dhaliilay hadaladii ka soo baxay dawladda Soomaaliya ee ay ku durayeen heshiiska Dekedda Berbera isaga oo sidoo kalena Madaxweyne Muuse Biixi ku canaantay in aanu jawaabtii ku habboonayd ka bixin ee ay ahayd in uu midida dhulka dhigo maadaama aanay Somaliland wakhtigan u baahnayn dagaal iyo colaado ay gasho ee loo baahan yahay in arrimaha diblomaasiyad iyo wada hadal lagu xalliyo mar walbana danta umaddani ku jirto nabad gelyo in ay ku gaadho hadafkeeda isaga oo dhinaca kalena Siyaasigu si weyn uga hadlay qorshayaasha ka siyaasi ahaan uga meel yaalla dhibaatada qaadku ku hayo qarankeena oo uu ku sheegay mid dhaqan dhaqaale oo u baahan in umadda laga jiheeyo si ay iskooda isaga daayaan qaadka oo ay noloshooda u raacdaan.
Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye (Madaxweynaha Mustaqbalka) oo shalay waraysi siiyey Wariye Xamse Awoowo oo ka tirsan Telefishanka Star Tv ayaa waxa uu sidoo kale siyaasigu baaq nabadeed u soo jeediyey beelaha walaalaha ah ee dagaalku ku dhex maray Buuhoodle isaga oo xukuumadda iyo shacabka reer Sanaag ugu baaqay in ay adkeeyaan nabaddii ay dhawaan isal qaateen beelaha walaalaha ah ee Dararweyne.
Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye (Madaxweynaha Mustaqbalka) oo ugu horrayn ka hadlaya hadaladii Khayraha Soomaaliya iyo Madaxweyne Muuse isugu jawaabeen waxa uu yidhi: “Arrinka ay dawladda Soomaaliya ka hadashay ee la xidhiidha Heshiiska Dekedda Berbera iyo jawaabtan Madaxweynuhu ka bixiyey anigu fikir ahaan waxaan qabaa in aanay ku habboonayn wakhtigan oo Soomaaliyana ay ku degdegtay oo ka hor inta aanay hadalkaasi adag soo saarin waxa ay ahayd in ay la sugto miiska wada hadalka innoo socday. Waxa wacnayd in ay la sugto miiska wada hadalka oo marka aynu isku nimaadno wixii ka soo baxa ay ka tidhaahdo wixii ay ka odhanayso oo wax la isku og yahay ay kaga hadasho markaasi. Taasi Soomaaliya way ku degdegtay tan kale ee Madaxweynaha laftiisa isan jawaabtaasi waxaan qabaa in uu ku degdegay iyo dagaalkaasi uu sheegay. Madaxweynaha Somaliland waxa ay ahayd in uu midida dhulka dhigo oo waxyaabihii kale ee looga wareegi karo looga wareego. Waayo dad kala tagaya ma nihin. Dagaalna maanta wax uu innoo soo sidaa ma jirto oo waa waxa Soomaali halkaa dhigay ee baabi’iyey. Shantii Soomaaliyeed ka kala kaxeeyey weeyi. Imika ayaynu innagu ka soo kabanay haddii aan nahay reer Somaliland dagaal iyo baro-kac iyo dhibaato. Mid dambena umaddu taag uma hayso anna ma taageersani. Wax kasta oo inna dhex mara waxaan leeyahay waa in aan innagu ku dhammaysanaa miiska wada hadallada. Somaliland waa astaan nabad gelyo u taagan. Waxaanay halkaa ku soo gaadhay nabad gelyo. Waxa ay ahayd Madaxweynuhu in uu si kale u dhigo oo xaaaladda qaboojiyo. Qoladaasi Soomaaliyana si wanaagsan umay hadal oo way degdegeen. Waxa ay ahayd in xaaladdaasi iyo kuwo kaleba lagaga wada hadlo miiska wada hadallada ee loo ballansanaa”.
Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye (Madaxweynaha Mustaqbalka) oo ka hadlayay xaaladda qaadku ku hayo dadkeena iyo waxa isaga uga qorshaysan ka siyaasi ahaan ayaa waxa uu yidhi: “Jaadku maanta waxa uu ka mid yahay aafooyinka ugu waaweyn ee dalkan iyo umaddan haysta. Dhaqaalaha Somaliland waxa ragaadiyey waa jaadka. Waxa aad ogtihiin Khamiistii qaad waddanka muu iman ama wuu yaraa. Kadib magaalada ayaan sidaa u eegay. Runtii aadbaan ugu farxay. Xashiish ma laha, baco xun ma laha, garaabo ma laha. Magaalada nadaafaddeeda waad yaabaysay. Dadku dad waxa fresh ah oo huteellada wada camiray bay ahaayeen oo soo wada jeeda oo aad yaabayso muuqaalkooda. Lacagta malaayiinka Doollar ah ee innaga baxayaa innaga ayay innagu dhex wareegi lahayd oo waddankeenu kor buu ugu kici lahaa haddii qaadkan la joojiyo ama wax kale lagu baddalo. Ka siyaasi ahaan annaga waxa noo qorshaysan oo barnaamijkayagu yahay in aanaan joojin balse la qaado tallaabooyinkii dadki isaga joojin lahaayeen ama lagu yarayn lahaa ee ay iskooda wax kale ugu qabsan lahaayeen oo ay shaqadu ugu horrayso in horta dadkan loo qabto. Marka dadkii shaqo abuur loo sameeyo ee dhaqaalahooda kor loo qaado dadku way mashquuli lahaayeen oo waxbay qabsan lahaayeen. Waxaan leeyahay qaadku waa aafo iyo dhibaato dhaqan dhaqaale oo dalkeena haysata oo loo baahan yahay in siyaasad cad iyo qorshayaal laga yeesho annagana way noo caddahay wixii aannu umadda kaga badbaadin lahayn”.
Dhinaca kale Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye (Madaxweynaha Mustaqbalka) oo ka hadlayay arrimaha nabadgelyada iyo beelaha walaalaha ah ee Somaliland ayaa waxa uu yidhi: “Nin nabadeed baan ahoo awalba sidii aan nabadda ugu baaqi jiray ayaan ugu baaqayaa imikana waayo Somaliland nabad bay ku caano maashay oo colaad Ilaahay baa innaga badbaadiyey innana waan ka digtoonahay oo nabadda ayaan la jirnaa. Weelka kali ah ee maanta Somaliland haysataa waa nabad. Dhaqaale ma haysano nolol kalena ma haysano ee nabad baan haysanaa. Sicir barar iyo dhibaato dhaqaale ayaa inna haysata shaygaa kali ah ee aan haysanaa waa nabad ee aan ku soo toosnaa taasina haddii la waayo dhibaato weyn baa innagu dhacaysa. Nabaddu waa geed hadhaca oo aad hadhasanayso oo aan ku nasanayso. Beelaha walaalaha ah ee Buuhoodle ku diriray waxaan ugu baaqayaa in ay nabadda ilaaliyaan”. Ayuu yidhi Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye. Isaga oo dhinaca kalena soo dhaweeyey heshiiskii beelaha walaalaha ah ee reer Sanaag la kala dhex dhigay gaar ahaan deegaanka Dararweyne isaga oo Xukuumadda ugu baaqay in ciddii dambe ee shaqaaqadaasi oo kale bilawda gacan bir ah lagu qabto oo dhinac looga soo wada jeedsado isaga oo beelahaasina ugu baaqay in ay nabaddaasi ay qaateen ilaaliyaan.
Halkan Ka Daawo Hadalka Siyaasiga:
Previous PostQadar Oo Soomaaliya Ka Caawinaysa Sidii Ay Dagaal Ula Gali Lahayd Mashruuca Dekedda Berbera Iyo Farmaajo Oo Wiigga Dambe Tagaya Caasimada Doha Next Post“Maraykanku Wuxuu Yidhi Ma Yeelayno Itoobiya Inay Bad La’aato, Markaa Xukuumadda Waxaanu Leenahay Ka Digtoonow Heshiisyada” ......Sheekh Aadan Siiro